Umatshini wemaski yekomityi Abavelisi kunye nabaThengisi-boMzi-mveliso base China - iQuanzhou waimaoniu yokuNgenisa kunye nokuThengisa iiRhwebo kumazwe angaphandle, Co, Ltd.
Umatshini wemaski sisiciko esinezinto ezininzi ezingalukwanga ezenziwe ngokucinezela kushushu, ukwenza ifowlda, i-ultrasonic welding, ukususa isikhuhli, ukucheba ibhulorho yendlebe kunye nezinye iinkqubo zokuvelisa iimaski ezahlukeneyo ngokusebenza kokucoca. Izixhobo zeemaski aziyoomatshini omnye, zifuna ukusebenzisana koomatshini abaninzi abagqibezela iinkqubo ezahlukeneyo. Ezona zixhobo zemaski zidumileyo kwintengiso zibandakanya; umatshini wokumisa ikomityi obhitywe ngomatshini, umatshini wokugcina imaskethi ongasukiyo, umatshini wokukopa okwenziwe ikomityi, 3M9001 / 9002 umatshini wokugoqa wemaski, umatshini wokugcina iimasi, umatshini wemaski othuli-ntathu, njl.
I-5kg / cáŽ¡
Umatshini wemaski yendebe is composed of a series of machines for the production of cup masks, including: cup mask forming machine, cup mask mask machine, turntable cup mask welding and slicing machine, cup mask breathing valve punching machine, cup Type mask nose line bonding machine, cup type mask ear strap spot welding machine, cup type mask monochrome printing machine, cup type mask breathing valve welding machine, etc.
Ukufumba ikomityi yekomityi yokwenza umatshini
Umatshini wokumisa ikomityi enomphetho unokuzalisa ngokuzenzekelayo iinkqubo ezininzi ukusuka kokondla ukuya kubumba bexesha elinye, ukusika kunye nokubuya. Xa kuthelekiswa nokondla okwenziwa ngokwesikhokelo, ukubuya kunye nokusika, kungonga abasebenzi abangama-3-5, kwaye kungagcinwa yonke imizuzu. Ukuveliswa kwee-masks ezingama-30 ukuya kwengama-8, kusetyenziswa inkqubo yokulawula ye-PLC, useto lwesikrini sokuchukumisa, ukusebenza ngokulula nangokukhawulezayo, kunokusetyenziswa ngumntu omnye, kufuneka kuphela ukondla ngesandla kunye nokufumana kwakhona. Ukuphucula ukuphuculwa kwemveliso.
Iparamitha yomatshini wokuzenzela ikomityi ezenzekelayo:
Uxinzelelo lomoya: 5kg / c㎡
Ubungakanani boomatshini: 3400 * 1230 * 1900MM
Ubunzima bomatshini: 500KG
Amandla aphezulu: 10KW;
Amandla okusebenza: 5KW
Isantya: 30-36PCS / MIN
Umatshini wokudibanisa imask buso enomkhombe ikwabizwa ngokuba sisiringi. Isebenzisa ikakhulu imigaqo-nkqubo yokusika i-ultrasonic kunye nokufaka i-othomathikhi ngokuzenzekelayo kunye nokutywinwa komda ukugqiba ukusikwa okukhethekileyo okwenziwe kunye ne-welding yezilayi. Lo matshini usombulula iintsilelo zomatshini wesilenji wendalo, njengokuma okungachanekanga, ukulawulwa kwesayizi engalunganga, ukusebenza kwemveliso ephantsi kunye neendleko eziphezulu zabasebenzi. Idibanisa iinkqubo ezininzi ezinje ngokungathandi, ukukroba nge-roller, ukusika inkunkuma, ukwahlula inkunkuma, kunye nokugqiba ukwenziwa kwemveliso, okuphucula kakhulu ukusebenza kakuhle kwemveliso, kunciphisa iindleko zemveliso, kwaye kwenza iimveliso zibekwe emgangathweni ngakumbi, zizinzile kumgangatho kwaye zintle ngakumbi ngokubonakala.
Iparamitha yomatshini wokugcina imaski yomatshini:
Amandla ombane ombane: 220V, 50 / 60HZ
Ubungakanani boomatshini: 840x630x1430mm
Ukukhupha ubungakanani besakhelo: 1550x620x1510mm
Uxinzelelo lomoya: 6Kg / cm
Iziphumo: 50-60pcs / imiz
Amanqaku omatshini wokuzenzela ikomityi yekomityi ozenzekelayo:
1. Ubalo oluzenzekelayo, ulawulo olululo lokusebenza kunye neshedyuli yemveliso.
2. Ukulawulwa kokuguqulwa rhoqo, lungisa isixhobo esisebenzisa isantya ngokweemfuno zakho.
3. Ukujikeleza ibhokisi yokulawula ukujikeleza, ukuhlengahlengisa indlela yebhokisi yokulawula ngokweemfuno zabathengi.
4. Ukuqokelela okuzenzekelayo kwezinto ezingafunekiyo, ukuze izinto ezingafunekiyo zinokurhoxiswa ngokuzenzekelayo, kuncitshiswe abasebenzi abasebenzayo.
5. Tsala ityhubhu kwizinto kwaye ubeke ngokuchanekileyo ngakumbi, ezinokulawula ububanzi bezinto ezingavuthiyo ubuncinci kwaye ugcine iindleko.
6. Ubungakanani kunye nobungakanani bemveliso egqityiweyo ilawulwa ngokufanayo kukuphambuka kwe-± 1mm, elawula ngokufanelekileyo ubude bemveliso egqityiweyo, ukwenzela ukuba isilayidi sihlangabezane neemfuno zenkqubo yokuvelisa kunye nokuphelisa inkunkuma.
7. I-rack yokondla ozimeleyo, kulula ukuyikhetha kwaye uyibeka kwaye uhlengahlengise izinto eziluhlaza.
Umatshini wokucheba wekomityi yekomityi kunye nomatshini wokukrola
Umatshini wokudibanisa ikomityi yefask-umatshini wokudibanisa ingqekembe ngokuyintloko usebenzisa i-ultrasonic welding kunye ne-othomathikhi yokufaka uphawu ukugqibezela inkqubo ye-welding kunye ne-punching yomda we-mask omile okwekomityi. Ngumatshini wokudibanisa ubuchule ukudibanisa iinkqubo ezimbini ezizimeleyo zokwenza ikomityi yokwenza imask kunye nokuhlaba. Isisitishi se-multi-station i-turntable ifakwe isixhobo sokusika kwi-welding. Iintloko ezimbini zokwenza i-welding kunye nokusika umsebenzi ngaxeshanye. Inkqubo ye-PLC yolawulo iyasetyenziswa. , Ukucwangciswa kwesikrini sokucofa, ukusebenza ngokulula kunye nokulula, kunokusetyenziswa ngumntu omnye kunye nomatshini omnye, kufuneka kuphela abasebenzi ukuba bakhuphe kwaye bathathe izixhobo, ezinokuthi zisindise kakhulu abasebenzi kwaye zenze ukuveliswa kwemaski yekomityi kube lula kwaye kukhawuleze.
Iimpawu zentsimbi yokujikeleza ikomityi yekhabhathi yomatshini kunye nomatshini wokukrola:
1. Isixhobo somgangatho wokulungisa ngokuzenzekelayo, umatshini ulungisa ngokuzenzekelayo inqanaba, elenza lula ubunzima bokwenza ukusetyenziswa kunye nokuqinisekisa umphumo wokubetheka.
2. Ulwakhiwo lwezikhululo eziphakathi kwezitulo ezininzi, ukusebenza okukhuselekileyo, kunokukunciphisa ngokukuko ukwenzeka kweengozi kumashishini.
3. Ukunyibilikisa kunye nokuthambisa kwenziwa kumatshini omnye, ukubeka indawo kuchanekile ngakumbi, ukucheba imaski kuya kuba yinto efanayo, kwaye inkangeleko intle ngakumbi.
4. Ubume bokuma komzimba, ukuze sonke isakhelo sikwazi ukujamelana namandla amakhulu okubhoboza ngexesha lenkqubo, kwaye isiphumo sokubhoboza singcono.
Uhlobo lwendebe yentsika yohlobo lokujikeleza kunye neparamitha yomatshini wokukrola:
Ubungakanani bemveliso: 800x1120x1750mm
Iziphumo: 8-10 iziqwenga / imizuzu
Ukufumba ikomityi yohlobo lokuphefumla lwe-valve yokuphefumla umatshini
Isetyenziselwa ukohlwaywa kwevalve yokuphefumla kwisiphelo esingaphambili semaski enekomityi. Yamkela utshintsho lwenyawo, ekulula ukusebenza. Ubungakanani bokubhoboza kunye nobumba be-mask bunokuqulunqwa ngokweemfuno zabathengi.
1. Ukukhonkxa ngokuthe ngqo
2. Ukukhawuleza isantya, 50-60 ngomzuzu
3. Ukusebenza ngokulula
4. Ethuleyo kwaye kungekho ngxolo
5. Umatshini ubumbekile kwaye ungathathi ndawo
Ubungakanani 3500 x 1500 x 1800mm
Ukusebenza kakuhle: 20-70 / ii-pcs
Amanqaku omatshini ozenzekelayo wekomityi:
1. Inkqubo esezingeni eliphambili le-servo kunye neenkqubo zokugcina amaqondo obushushu amkelweyo lilawulwa yinkqubo ye-PLC ukwenzela ukuba izinto zingeniswe, zenziwe, zi-welded, kwaye zibetheke kube kanye, kwaye yonke inkqubo yokuvelisa izenzekelayo.
2. Izixhobo zifuna ukuxhotyiswa kuphela ngomatshini ozimeleyo ojingise indebe yentsimbi yokuqhawula umlebe, kunye nokuvelisa iimveliso zemaski ezingenakubalwa.
3. Iimveliso zenziwe ngendlela engagungqiyo kwaye umgangatho udibana ngokupheleleyo okanye udlulele kumgangatho wokuhlola wasekhaya nowangaphandle. Kwangelo xesha, igcina ngaphezulu kwezinto ezingama-30% kunakwizixhobo zemaski zangaphambili. Ke ngoko, ngokwenyani, ukunciphisa iindleko kunye nokuphuculwa kokufezekisiweyo kufezekisiwe!
Umatshini wohlobo lomatshini wokukhusela indlebe kwindlebe
Uxinzelelo lomoya: 3kg / CM
Ubungakanani boomatshini: 800 * 600 * 1400MM
Umthamo: iziqwenga ezili-10--12 / imizuzu
1. Uyilo lomatshini lincinci kwaye luguquguqukayo, kwaye ukusebenza kulula kwaye kulula.
2. Ingasetyenziselwa i-welding flat, straps yangaphakathi yendlebe / imitya yangaphandle yendlebe, imask enesityu esenziwe ngekomityi, imaski emile okomlilo wedada kunye nezinye iimaski ezime ngendlela ekhethekileyo.
3. Emva kokuba umzimba we-mask ugqityiwe, intambo yendlebe ibotshwe ngesandla, ukusebenza kulula, kwaye unxibelelwano luqinile kwaye luhle. Abasebenzi abanezakhono bagqibezela ukubethelwa kweentambo zemaski ezikwiziqwenga eziyi-10-12 ngomzuzu.
1. Umatshini welding we-Ultrasonic wamkela i-transducer yoqobo, ukukhutshwa okuzinzileyo, indibano ephezulu yecandelo, ukusebenza ngokuthembekileyo, uyilo olupheleleyo lomatshini, ukusebenza okufanelekileyo, ikakhulu zilungele iimaski ezingama-N95 (iimaskhi ezimile okwekomityi, iimaski zothuli, imaski yedada , njl. njl. ii-straps zeendlebe zenzelwe ukutsala amabala, kunye nokusebenza okuphezulu kwemveliso, ukusebenza ngokulula, umgangatho ozinzileyo, njl. njl.
2. Uyilo lwekholamu oluphinda kabini unokuyicombulula ingxaki yokubuyela umva ngexesha lokutsheka;
3. Umsebenzi ulula, indawo ethe welding iqinile kwaye intle emva kokubetheka, kwaye ayonakalisi into ngokwayo.
Isetyenziswe kakuhle kwizitayile ezahlukeneyo zomatshini wemaski weN95
Ubungakanani boomatshini: 690 * 400 * 1295MM
Umthamo: iziqwenga ezili-10--15 / imizuzu
1. Ukulawulwa kwe-microcomputer inezinga eliphezulu lokuzenzekelayo kunye nokusebenza okulula;
I-2.Umatshini wokuprinta kunye nesantya esinokutshintshwa ukuze sihlangabezane neemfuno zechungechunge lee-mask ezingama-N95;
3.Ukulungelelanisa ngokugqibeleleyo isikheyibhuli ukuqinisekisa ukuba uxinzelelo lokuprinta alungelelene;
4. Yamkela iziko le-shaft yokungenisa elizweni kunye nomkhono weshawari ukwenza isikripiti sokushicilela kakuhle;
Isantya esisebenzayo sinokuhlengahlengiswa ngokuzimeleyo, ekulula ngakumbi kwaye sikhawuleza ukuyisebenzisa
Ivela phi imaski yethu?